Amin'ny vanim-potoanan'ny hatsarana dia lohahevitra tanora sy isam-batan'olona ity. Fandavana ny fiarahana amin'ny hafa, fanentanana ny teny mahitsy, kely, tapaka ary tokana no toetra mampiavaka an'ity taranaka ity; Ny hatsaram-panahy dia ny fomba fanehoana azy ireo tsotra, mahatsikaiky ary sariaka, ary izy io koa dia olona mavitrika ...
Ny fomba fikajiana ny habetsaky ny kofehy manjaitra. Miaraka amin'ny fiakaran'ny vidin'ny akora lamba, mirongatra koa ny vidin'ny kofehy fanjairana, indrindra ny kofehy fanjairana avo lenta. Na izany aza, ny fomba fikajiana ny haben'ny kofehy fanjairana ampiasain'ny orinasan-damba dia mos ...
Ny famokarana sy fivarotana milina fanjairana indostrialy any Shina dia nihena tamin'ny taona 2019 Ny fangatahana fitaovana lamba sy fitafiana (ao anatin'izany ny milina lamba sy milina fanjairana) dia nitohy nihena nanomboka tamin'ny taona 2018. Nidina ny vokatr'ireo milina fanjairana indostrialy tamin'ny taona ...